The Ab Presents Nepal » तुला राम डाङ्गी छेत्री ले आफ्नो प्रेमिकालाई बोलाए कपुरकोटमा भेट्न हेर्नु होस् भिडियो सहित !
तुला राम डाङ्गी छेत्री ले आफ्नो प्रेमिकालाई बोलाए कपुरकोटमा भेट्न हेर्नु होस् भिडियो सहित !
आर पोखरेल , काठमान्डाँै -: लोकदोहोरी गायक तुलाराम क्षेत्री र गायिका मालती खरेलको आवाजमा सजिएको निकै मौलिक लोकदोहोरी गीत “कपुरकोटमा भेटन आउ सानु ” गीतको भिडियो ब्लोसम म्युजिक प्राली मार्फत बजारमा सार्वजनिक भएको छ ।
लोक सस्कृतिलाई जर्गेना गदैँ माया प्रेमका भावहरुलाई गीतमा समेटिएको छ । पुर्णिमामा जुन झुल्किदा आफनी प्राण प्यारी मायालुलाई भेटन आग्रह गरिएको छ । तुलाराम क्षेत्रीको शब्द तथा कमल ज्योतीको लय सिर्जना गीतमा रहेको छ ।
सागर गौत्तमको छायाँङकन तथा रोशन धितालको सम्पादन तथा उदय पौडेलको निर्देशन भिडियोमा रहेको छ । “कपुरकोटमा भेटन आउ सानु ” गीतको भिडियोमा रेश्मा सुवेदी , अर्जुन डिसी , भुपी विरही , कविता बुढा मगरको अभिनय भिडियोमा रहेको छ ।
“कपुरकोटमा भेटन आउ सानु ” गीतको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला -: